काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे जालमा ? यसरी भयो पर्दाफास ! -
Home News काठमाडाैँका यी २० वर्षीय युवकको मोबाइलमा ४६ युवतीको ‘नग्न’ भिडियोः कसरी पार्थे...
तर युवकले अनुहार नदेखाइ पठाउँदा के फरक पर्छ र । तिमी भन्ने पनि त चिन्दैन भन्दै फ काउन र ध म्काउन थाल्यो । त्यसपछि दीक्षाले अनुहार नआउने गरी आफ्नो न ग्न शरीरको फोटो खिचेर युवकलाई पठाइन् । युवकले धेरै भन्दा धेरै फोटो पाइसकेपछि फेरि अर्को ब्ल्या कमेल सुरु गर्‍यो कि तिम्रो आइडीबाट आएपछि तिमी नै हो भन्ने थाहा भइहाल्छ, अब अनुहार सहितको पठाऊ ।
दीक्षाले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेपछि युवकले फेरि दीक्षाको आइडीसमेत आउने गरी स्क्रिनसट गरेर अरूलाई पठाइदिन्छु भन्दै ध म्का उन थाल्यो । दीक्षा बा ध्य भएर अनुहार नै आउने गरी आफ्नो शरीरको न ग्न फोटो पठाउन थालिन् ।
सुरुमा अनुहारबाहेकको फोटो मागेको युवक झनै हौसिन थाल्यो र पछि अनुहारसहित आउने गरी न ग्न शरीरको भिडियो नै माग्न थाल्यो ।
दीक्षाले आफ्नो इज्जत जोगाउन भन्दै युवकले जे जे भन्यो, त्यही गर्न थालिन् । युवकले दीक्षालाई न ग्न शरीरमा ह स्तमै थुनसम्म गरेको भिडियो पठाउन भन्दै ध म्काउन थाल्यो । दीक्षा युवकले जे जे भन्यो त्यही त्यही गर्न थालिन् । त्यसपछि युवकले दीक्षालाई आफू बैंककमा नभएर काठमाडौँमै भएको र भेट्न आउन दबाब दिन थाल्यो । दीक्षाले भेट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कोसिस त गरिन् तर युवकले ध म्काउन छाडेन ।
त्यसपछि बल्ल दीक्षाले आफू समस्यामा परेको र युवकले बारम्बार ध म्की दिँदै मा नसिक या तना र यौ न शो षण गरिरहेको बारे भाउजूलाई बताइन् । भाउजूले दीक्षालाई सम्झाउँदै तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन, त्यो व्यक्तिले तिमीलाई कुनै क्षति पुराउन सक्दैन हिँड उजुरी गरौँ र युवकलाई प क्राउ गरौँ भनेपछि दीक्षा तयार भइन् । बुवा, दाजु आदि कसैलाई पनि जानकारी नदिने शर्तमा दीक्षा भाउजूसँगै भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा पुगिन् । अनि घटनाबारे महिला प्रहरीसँग बेलिबिस्तार लगाउँदै आफू अत्यन्तै तनावमा पुगेको र डि प्रेसनको शि कार भइसकेको बताइन् ।
महिला प्रहरीले दीक्षालाई सम्झाउँदै त्यस्तो केही नहुने र युवकलाई पक्राउ गर्न सकिए ती प्रमाण सबै नष्ट गराउन सकिने भन्दै सम्झाएपछि दीक्षा केही सम्हालिइन् र ब्युरोमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले फेरि दीक्षालाई उक्त युवकसँग कुराकानी गर्न र भेट्न आउन तयार रहेको बारे बताउन भने । दीक्षाले युवकको मोबाइल नम्बर पनि मागिन्, तर युवकले मोबाइल नम्बर दिन मानेन ।
बरु आफूले तिमीलाई चिन्ने भएको कारण वसन्तपुरको कुमारी घर छेउमा आउन भन्यो । दीक्षाले प्रहरीसँगको समन्वयमा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् र मङ्सिर २ गते दीक्षा सादा पोसाकका प्रहरीसँगै युवकलाई भेट्न वसन्तपुर पुगिन् । केही समयपछि युवक पनि त्यहीँ आइपुग्यो र आफू त्यही युवक भएको बताएसँगै प्रहरीले युवकलाई प क्राउ गर्‍यो ।
ती युवक थिए काठमाडौँ महानगरपालिका १२, भोटेवहाल घर भएको २० वर्षीय लव खड्गी । पेसाले लव एक ट्याटु आर्टिस्ट थिए र ऊ वसन्तपुरमा रहेको एक ट्याटु पसलमा काम गर्थे । आफू बैंककमा बस्ने गरेको बताए पनि लव कहिल्यै बैंकक पुगेका थिएनन् । काठमाडौँमै बसेर किशोरी र युवतीहरूसँग कुराकानी गर्थे र न ग्न फोटो तथा भिडियो माग गरी ब्ल्याकमेल गर्थ्यो । तर उसले कहिले पनि आफ्नो सक्कली नाम तथा ठेगाना बताउँदैनथिए ।
न त आफ्नो रियल फेस नै देखाउँथे ।
Previous articleतासबाटै संसारको भवि’ ष्यवाणी गर्ने पहिलो महिला क्षेमता,जसले क्या, न्सर समेत निको पार्ने ग्या, रेन्टी लिइन (भिडियो सहित)
Next articleलकडाउन बारे आयो यस्तो खबर, नेपालमा ओमिक्रोन भेटिएपछि सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा (भिडियो हेर्नुहोस)